विज्ञापनमा देखाइने घडीको सुई १० बजेर १० मिनेटमै किन हुन्छ ?
बिहानको १० : ४१
news24nepal.tv . ३ महीना अघि
काठमाडौं । प्रायः विज्ञापनहरुमा देखाइने घडीमा रहने घण्टा र मिनेटको सुई १० बजेर १० मिनेट जाने गरी मिलाइएको हुन्छ । आखिर विज्ञापनको घडीमा किन १० बजेर १० मिनेट गएको देखाइन्छ त ? यसका अनौठा कारणहरु छन्...
विज्ञापनमा देखाइने घडीको सुई किन १० बजेर १० मिनेटमै हुन्छ ?